minthantzaww: ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. Website စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ်သိမ်းမယ်..အခြားနည်းပညာများစွာ
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. Website စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ်သိမ်းမယ်..အခြားနည်းပညာများစွာ
Flash Songs သီချင်းများကို ဒေါင်းလော့လုပ်၍ VCD/DVD ခွေကူးမယ်
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. Website စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ်သိမ်းမယ်...
Flash Songs လေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြရအောင်
မိမိပုံကို စာလုံးတွေနဲ့ အလှဆင်ချင်လား ( ဝက်ဆိုဒ်မိတ်ဆက် )
Facebook မှာ Subscribe လုပ်တယ်ဆိုတာ
ဟိုတစ်နေ့ က ညီငယ်တစ်ယောက် တောင်းထားတာ မေးထားတာကိုရှင်းပြရင်း အလိုရှိတဲ့သူတွေလည်း
ယူလို့ ရနိုင်ရန်အတွက် ဒီပို့ စ်လေးကိုတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လည်းလေ့လာသူအဆင့်မျှသာဖြစ်၍ လိုအပ်
အွန်လိုင်းပေါ်မှ Flash သီချင်းများကို ဒေါင်းယူပြီး ခွေဘန်းချင်လို့ လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ရှာဖွေ
ကြည့်တော့ ဒီ Obit Downloader လေးနဲ့iWisoft flash SWF to Video Converter လေးကိုတွေ့ ရှိပြီးအသုံး
ပြုကြည့်ရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဝေငှပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုပုံများအား ပုံ
များနှင့်တစ်ကွ ရှင်းလင်း၍ ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၁) Obit Downloader V4.1.02(4.17 MB)
ဒီကောင်လေးအား ဒီနေရာလေးမှာ ယူလိုက်ပါ။
(၂) iWisoft Flash SWF to Video Converter V3.4+ Patch (6.33 MB)
ဒီကောင်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာ ယူလိုက်ပါ။Full Version အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Patch ဖိုင်လေးပါတစ်
ပါတည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောင်လေးက AVI / MPGE(VCD-DVD) / MP4 (iPod - iPhone-
Apple TV) / MP4(PSP - PS3) / Mobile 3GP / Zune / WMV / Pocked PC / Windows Mobile / FLV-
Youtube / Mov / MP3 Audio / Picture ဖိုင်များအဖြစ် Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) FLASH SONGS Word File
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အွန်လိုင်းမှ Flash Songs မြန်မာသီချင်း ပုဒ်ရေ (၂၀၀)ခန့် အား ကူးယူ
လင့်ချိတ်ပေးထားသော Word File လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးမှာ ယူလိုက်ကြပါ။
အထက်ပါတင်ပေးထားသော ဒေါင်းလုဒ်ဒါ ၊ ကွန်ဗာတာတို့ အားအသုံးပြုပြီး ဖလက်သီချင်းများအားဒေါင်းယူ
လျှက် အလိုရှိသလိုကွန်ဗာ့ပြုလုပ်ပြီး အခွေကူးယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်၏ ဝေငှပေးမှုများအား မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာ ကူးယူပြီး အလိုရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြတိုက်မှသူငယ်ချင်းများ နည်းပညာ အသိ သုတ ကြွယ်ဝနိုင်ကြပါစေ။
အခုကျွန်တော် တင်ပေးတဲ. ဆော.၀ဲလ်က ကျွန်တော်တို. ဖတ်နေတဲ ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကို
pdf ဖိုင် အဖြစ်ပြောင်းပြီး အလွယ်တကူ သယ်သွားလို. ၇တဲ. ဆော.၀ဲလေးပါ ။
ကျွန်တော်တို. ဖတ်နေတဲ.၀က်ဆိုဒ် စာမျက်နှာ ကို print ထုတ်ဖို.အတွက် Ctrl+P ကိုတွဲနှိပ်၇င် အပေါ်က ပုံအတိုင်းမြင်၇ပါတယ်။(firefox browser ကနေသွားမယ်ဆို၇င် File>Print ဆို၇င်လဲ၇ပါတယ်)
ဒီပုံကတော. ကျွန်တော်တို. သိမ်းချင်တဲ.နေ၇ာေ၇ွးပေးတာပါ။
ဒီပုံကတော. ကျွန်တော် PDF ဖိုင် ပြောင်းထားတဲ.ပုံလေးပါ။ အသုံးဝင်မယ်လို. ထင်ပါတယ်ဗျား။
အောက်မှာ ဆော.၀ဲလ်လေး ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး။
Flash Songs လေးတွေလုပ်နည်း သင်ပေးပါလို့ Gtalk ထဲကို အက်လုပ်ပြီးမေးလာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်းစီကို လိုက်ဖြေပေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစာစုလေးနဲ့ အဖြေပေးလိုက်ပါရစေ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လိပ်စာကနေ ဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေသွား Download ချထားလိုက်ကြပါဦးနော်။
အားလုံး Down စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ချို့ကို ကျွန်တော် Down ပြီးသားတွေကို အောက်မှာ စုစည်းပြီးတော့အလွယ်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်သင့် Down ယူလိုက်ကြပါနော်။
http://mmflashsongs.multiply.com/ ကနေ Down ရမှာကတော့ Swishmax2ဒါရိုက်သုံးရန် ဆိုတာနဲ့ Swishmax3၊ Swishmax 3N4 crack ထည့်နည်း ဆိုတာ (၃)ခုဆိုရပါပြီ။ အသုံးပြုနည်းစာအုပ်နဲ့ မောက်အဖက်တွေ ၊ နောက်ခံတွေက ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
Download ချနည်းကလည်းလွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Swishmax3exe ကို Download ချမယ်ဆိုရင် သူ့ဘေးမှာပါတဲ့ DOWN ဆိုတဲ့စာကို ကလစ်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင် save file ဆိုတာကနေ သိမ်းလိုက်ပေါ့။
Swishmax version2က Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါရိုက်သုံးလို့ရပါတယ်။ version3ကတော့ Install လုပ်ရမှာပါ။ Install လုပ်နည်းစာအုပ်ပါပါတယ်။ သူ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ version2 က Plugin တွေထည့်သုံးဖို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ဥပမာ-မောက်အဖက်တွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် စာတန်းထိုးဖို့ကျတော့ version2 က ပိုလွယ်လို့မဖြစ်မနေသုံးကြရအောင်ပါ။
အသုံးပြုနည်း video ဖိုင်လေးတွေ ဇွဲကပင်မြေ ဆိုက်ဒ်က တိုးတိုးလေး ဆီက ရလာတာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေငှထားပါတယ်။ Version3 တင်နည်းနဲ့ mouse effect တင်နည်းကို ကျွန်တော် video ဖိုင်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာလေး မှာ ယူလိုက်ကြပါနော်။
စာတန်းထိုးဖို့အတွက်ကို notepad သို့မဟုတ် word (မိမိအဆင်ပြေရာနဲ့) ကြိုပြီးစာစီထားကြပါနော်။ version2နဲ့ စာတန်းထိုး၊ သီချင်းသံစဉ်နဲ့ နောက်ခံပုံထည့်ထားနှင့်ပြီးမှ
Version3 (သို့)4ထဲကိုသွားပြီး မောက်အဖက်အလှထည့်ဖို့နဲ့ အချောသတ်ထုတ်ဖို့သုံးကြတာပေါ့နော်။
Version2 အသုံးပြုဖို့အတွက် စာအုပ် နဲ့ တစ်ခြား Swishmax အတွက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ် တစ်ချို့ကို ဒီနေရာလေး မှာယူလိုက်ကြပါနော်။ စာအုပ်ထဲမှာ သေချာရှင်းပြထားလို့ ကျွန်တော်ထပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီစာအုပ်တွေကြောင့်သာတတ်ခဲ့တာပါ။ အပြင်မှာသင်ပေးသူမရှိခဲ့ပါဘူး။
ပထမ သီချင်းထည့်တဲ့အခါ mp3 သီချင်းကို အရည်အသွေးမြင့်လွန်းရင်မရပါဘူး။ အရည်အသွေးက်ု ချပေးရပါမယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲအများကြီးရှိတဲ့အထဲက ကျွန်တော်သုံးတတ်တာ့ FormatFactory ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ သူ့ထဲမှာ high , medium , low ဆိုပြီး ရွေးရှာကြည့်ကြပါ။ medium နဲ့မရရင် Low နဲ့ ချရပါမယ်။
သီချင်းစာတန်းထိုးထည့်တဲ့အခါ အ၀င် effect နဲ့ အထွက် effect တွေ မဖြစ်မနေထည့်ပေးကြပါ။ မဟုတ်ရင် သီချင်းဆုံးသည်အထိ စာသားက ပျောက်မသွားပဲ ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ ထည့်နည်းကို နမူနာပြောရရင် အ၀င် effect ထည့်ပြီးရင် အဲဒီ effect ပေါ်ကို double ကလစ်နှိပ်ပြီိးတော့ preview ကြည့််ပေးပါ။ ထည့်ထားတဲ့စာသားအ၀င်နဲ့ သီချင်းရဲ့ သံစဉ်မကိုက်သေးရင် အဲဒီ effect လေးကို လိုရာနေရာအထိဆွဲသွားလိုက်ပါနော်။ စာတန်းထိုးထည့်ချင်ရင် စိတ်ရှည်ကြဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ ထည့်ချင်ရင်လဲ အ၀င် ၊ အထွက် effect ထည့်ပေးရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံထည့်ပြီးမှ စာတန်းထိုးလုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင် စာသားကို ပုံက ဖုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ ( ကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့ ပိုတိုရှော့လို layer ကို အပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရတာသိပါလိမ့်မယ်)။
ဓါတ်ပုံနှစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင် ပထမပုံရဲ့ အထွက် effect ရဲ့နောက်မှာ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ နောက်ထပ်တစ်ပုံကို ထည့်ပါ။ အထွက်effect ကိုလဲ နောက်နားခပ်လှမ်းလှမ်း (သီချင်းရဲ့ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာအထိသွားပြီးမှ) ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ အထွက်effect ထည့်ပါ။
မရှင်းလင်းတာများ ရှိခဲ့ကြရင် ayarlin.salin@gmail.com ကို ညနေ ၅နာရီခွဲကနေ ၆နာရီခွဲ အတွင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်တတ်သလောက် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို လုပ်တတ်စေချင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး ဆွေးနွေးရင်နှစ်ဦးစလုံးပညာပိုတိုးနိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။
Mouse effect (1)
Mouse effect (2)
Swishmax အသုံးပြုနည်းရုပ်ရှင် (၁)
Swishmax အသုံးပြုနည်းရုပ်ရှင် (၂)
Swishmax အသုံးပြုနည်းရုပ်ရှင် (၃)
Swishmax အသုံးပြုနည်းရုပ်ရှင် (၄-၅-၆)
ဒါကြောင့် ဒီနည်းကို သုံးလိုက်တော့ ကိုယ့်မေလ်းနာမည်ကိုလည်း သူများလည်း မသိဘူး ။ ဆက်သွယ်လို့လည်းရတယ် ။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ ။ ပြီးတော့ decembermgmg1992@facebook.comဆ
ိုတော့ လူလည်းရှိန်တာပေါ့ B-) သိတဲ့လူတော့ မသိရင်ခက်မယ်ပေါ့:P
မိမိတို့ရဲ့ ပုံကို အလှဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .... အဟမ်းအဟမ်း (ဈေးကိုင်တဲ့လေသံနဲ့)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချက်ရုမ်းနော် သုံးနေကျ စတိုင် ။ လိုက်မွှေနေရင်းနဲ့ တွေ့လာလို့ အားလုံးလည်းကလိလို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ချက်ရုမ်းအဖွဲ့တော့ လိုက်မွှေနှောက်နေပြီးသားပဲ :) အဖွဲ့အင်အားလည်းများနေပြီ ။ အတင်းသုတ်လို့လည်း ကောင်းပြီ ။ ကျွန်တော်ကလိထားတဲ့ ပုံကိုလည်း ကြည့်ပါဦး :)
ဒါက အဖွဲ့သား ဖိုးရှုပ်ရဲ့ လက်ရာ :D
စမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ------>>> ဒီနေရာကို အရင်သွားပါ ။
အဲဒီမှာ လုပ်ဖို့ ပုံရွေးကို ရွေးပါ ။
ကဲ့ ပုံရွေးပြီးရင် Submit လိုက်ပါ ။ ပုံကြမ်း မလှတလှထွက်လာလိမ့်မယ် ။ မတင့်သိမ်နဲ့ဦး ဘော်ဒါ :P
နာမည်ထည့်ပြီး Submit လိုက် ။ နောက်တစ်ခါ ပြီးရင်တော့ လာပြီကောင်းခန်း :)
အဲဒီမှာ ကြိုက်တာလေးတွေးရွေးပြီး ဒေါင်းလိုက်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်တော့ Capture လိုက်တာပဲ :) ။ ။
facebook မှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို Subscribe လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်
သူတို့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာကို သူ့တို့ရဲ့ Profile မှာ သွားမကြည့်ဘဲနဲ့ သိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်.....
သူငယ်ချင်း မဖြစ်သေးတဲ့ လူတွေကို subscribe လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့
လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကိုယ့်က သိရှိနိုင်တော့် ပိုကောင်းတယ်ဗျာ.....
ပြုလုပ်ပုံကတော့် အထက်ကပုံ အတိုင်း သူတို့ရဲ့ profile က subscribe ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
အသက်(၁၈)အထက်မှာသာ Subscriber ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်......
Gmail မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အီးမေးကို ဘယ်နေရာက ၀င်အသုံးပြုခဲ့တယ်၊ ပြုနေတယ် (Last Login Activity ) ဆိုတာကို ကြည့်လို့ ရတယ် Feature တစ်ခုရှိပါတယ်။ သိချင်တယ်ဆို Gmail Account ကို Login ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Gmail Page ရဲ့ အောက်ဆုံးကို သွားကြည့်ပါ။ ဒီလို မျိုးလေး တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါ အခုလို Login မ၀င်ခင်မှာ နောက်ဆုံး Login ၀င်ခဲ့တာ အခု အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပြူတာက ဖြစ်တာမို့Last Login Acticity မှာ အဲဒီလို ဖော်ပြနေတာပါ။ အသေးစိတ် ဘယ်နေရာတွေက ၀င်ရောက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင် "Details" ဆိုတာလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Pop-Up Window ပေါ်လာပြီး ဒီအကောင့်ကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကွန်ပြူတာတွေရဲ့ IP တွေနဲ့အချိန်တွေကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး ၀င်ခဲ့တဲ့ နေရာ (Activity) ၅ ခု ကို မှတ်ပေးထားတယ်။
IP တွေနဲ့အချိန်တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုတာလား၊ တခြားတစ်ယောက် အသုံးပြုခဲ့တာလားဆိုတာ ခန့် မှန်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်က IP လည်းဆိုတာ သိချင်တယ်ဆို ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ် Gmail ကို ၀င်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားတစ်နေရာက လည်း ဒီအကောင့်ကိုပဲ ၀င်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က ပုံစံမျိုး ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် တခြားဘက်က Login ၀င်ထားတာကို ထွက်သွားအောင် လုပ်လို့ တဲ့ Feature မျိုး Gmail က ပေးထားတယ်။ အဲဒီ Feature ကို "Remote Sign Out" လို့ ခေါ်ကြတယ်။
အပေါ်ကလိုပဲ Detail ဆိုတဲ့ နေရာကို နှိပ်ပါ။ ဒီတစ်ခါ ပေါ်လာတဲ့ Pop-up Window မှာ Concurrent Session Information ဆိုတာလေး အပိုပေါ်နေတာ တွေ့ ရမယ်။ တခြားနေရာ ဘယ် Browser, ဘယ် IP က ၀င်ထားတယ် ဆိုတာတွေ မြင်ရမယ်။ အဲဒီ အောက်မှာရှိတဲ့ "Sign out all other session" ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နှိပ်လိုက်ရင် တခြားနေရာက Login ၀င်ထားတာတွေ အကုန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီ Feature က အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ တခါတလေ တခြားသူရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Gmail ၀င်သုံးပြီး ထွက်ဖို့ မေ့ခဲ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီအခါတွေမှာ Gmail ကို login ၀င်ပြီး အပေါ်က ပြောထားသလို Sing Out လုပ်လိုက်မယ်ဆို အဲဒီထွက်ဖို့ မေ့ခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ အကုန် Logout လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ ကိုယ်မဟုတ်ပဲ တခြားတစ်ယောက်က ကိုယ့် Password ကို တနည်းနည်းနဲ့ ရလို့သုံးနေတာမျိုး ဆိုရင်တော့ တခြား Session တွေကို Logout ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့် Gmail ရဲ့ Password ကို အသစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။ Password ဆိုတာနဲ့Gmail Password အကြောင်းကို သိသလောက်လေး ဒီဘလော့ရဲ့
ဦးဦး မှော်ဆရာ မေးလ်မှ ပြန်လည်တင်ပြပါသည်( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com
Posted by minthantzaww at 06:25
သိသင့်သော ယောက်ျား မိန်းမကွာခြားချက်။
Mozilla Firefox တွင် သတိထားရမည့် ကိစ္စ
မှတ်ထားရမဲ့ (၂၅) ချက်
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ အင်တာနက်ပေါ်တ...
WinX DVD Ripper Platinum 6.3 နှင့် AVG Anti-Virus ...
ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ ဆိုက် foodbal...